Matangi: mutambo wevhidhiyo weLinux unonzwika senge ... | Linux Vakapindwa muropa
Zvirokwazvo iwe uchiri kurangarira iwo mutambo wevhidhiyo wekunyaradza wakatsvaira. Ndiri kureva musoro wacho Hondo Guta / Tangi 1990. Hapana chekuita nemifananidzo yeIzwi reMatangi, Hondo yekutinhira uye mimwe mitambo yemavhidhiyo yazvino, asi haina kushaya chero chinhu chingaite kuti iwe unakirwe wega musangano uchitamba uchipesana nemuchina kana neyechipiri mutambi uyo akabatsira iwe kubvisa matangi evavengi pasina kuperera negondo rako, nekuti kana zvirizvo ... Game Over.
Kune avo vasingayeuke, uyu mutambo wevhidhiyo waive 2D zita pakaonekwa rimwe kana maviri matangi munzvimbo yepazasi, pamwechete negondo rawaifanira kuchengetedza. Pakati pechidzitiro, pakanga paine akateedzana emakoridho uye marabrinthine zvakagadzirwa zvezvinhu zvakasiyana. Zvimwe zvezvinhu zvisingaverengeke, zvimwe zvinogona kuparadzwa nepfuti, zvichidaro zvichigadzira nzira.
Chinangwa chako Kwaive kwekuvhima nekuparadza matangi evavengi ayo aionekwa mumafungu munzvimbo yekumusoro kwechidzitiro, uye kuti havana kupfura gondo rako, vachiparadza chengetedzo yaimborikomberedza nekudaro vachikwanisa kuiparadza kamwe isina kudzivirirwa.
Uyezve, aive ne Screen mupepeti maunogona kugadzira mepu dzako kuti utambe pairi, chimwe chinhu chainakidza zvikuru, nekuti waigona kudzivirira gondo nezvinhu zvisinga tsvee kana kuita kuti zvinyanye kuomera vavengi vako kuti vauye kwauri ...
Zvakanaka, kana iwe uchinzwa nostalgic yeiyo vhidhiyo mutambo uye uchida kutamba zvakare pane yako distro, iwe hauzodi chero chero mhando emulator kana chero chinhu chakadai, sezvo ivo vakagadzira imwe kuvhura sosi kuitiswa inonzi Matangi. Iyo yakanyorwa muC ++ uye inoshandisa iyo SLD2 mifananidzo raibhurari.
Para isai, unogona kushandisa mirairo iyi muDebian / Ubuntu uye zvigadzirwa:
KutambaSimply sarudza 1 kana 2 vatambi vane museve makiyi uye tanga mutambo. Unogona kushandisa miseve kufambisa tangi yemutambi 1, kana makiyi eWSAD emutambi. ENTER, imbomisa mutambo, uye kuruboshwe uye kurudyi Ctrl kupfura ...
Mamwe mashoko - Matangi saiti paGitHub
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Matangi: mutambo wekare wevhidhiyo weLinux unonzwika senge ...
mutambo uyu unounza ndangariro